आस्थाको सिसि टिभी फुटेज बाहिर ल्याउन सक्ने प्रहरीले ३३ किलो सुनको भिडियो किन लु’कायो? (भिडियाे)
अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी अास्था राउत हुन् । उनी बिमानस्थलमा छाडा शब्द प्रयाेग गर्दै अाफू ठूली बन्न खाेजेकी थिइन् । तर बिमानस्थल भनेकाे सबैकाे लागि बराबर मानिने छ । के थाहा कलाकार, नायक, नायिकाले नै दुइ नम्बर गरेका छन् की? त्यसैले प्रहरीले जस्लाइ पनि जाँच गर्न पाउनु पर्छ ।
नताको बोल्न पाउने अधिकार खो’स्न नहुने सुष्मा महराले बताएकी छिन् । देशमा नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार कु’न्ठित गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
“ग’ल्ति मानिसबाटै हुन्छ । सबै मानिसको एउटै स्वभाव हुँदैन कसैले अत्या’चार सहन्छ भने कोही त्यस बिरू’द्धमा खरो उत्रिन्छ,” उनले गायिका आस्था राउत बिरु’द्ध प्रहरीको कदमको बिरो’ध गर्दै बोल्छिन, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको देशमा जनताले बोल्न पाउने अधि’कार छ ।
अत्या’चार परेको बेला म पनि बोल्छु । मान्छे मा’रेको होइन । रि’सको आ’बेगमा आस्थाको बोलीमा केही शब्द चयन ग’लत भकै हो । तर उहाँ आफैंले त्यसलाई फिल गरेर मा’फी मा’गिसकेको अवस्थामा बोल्दैमा अप’राधिक चित्रण गरी गायिका आस्था राउतलाई प’क्राउ पूर्जी तय गर्नु निन्दनीय छ ।”
उनले बोल्न पाउने अधिकार ह’नन् गर्दै फेरी निर’ङ्कु’शता नै ला’द्न खोजेको हो ? प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्, “ग’ल्ति दुबैबाट देखिन्छ दुबैको छा’नबिन हुन जरूरी छ । सानो तिनो कुरालाई ग’ल्ति पहिल्याई पछि लाग्नुभन्दा ठूलठुला अपरा’धिक काम गर्नेलाई कार्बा’हीको दायरामा ल्याउनुस् । छोरी कु’टेर बुहारी तह लगाउने काम नगर्नुस् ।”
“आशा लाग्दा ठूलठुला नेताहरूले पनि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा स्टुडियो भित्रै पत्रकार र जनतामाथि धेरै अ’पमानजनक शब्द बोल्दा खोई त पक्रा’उ पूर्जी ?
कानुन सबैको लागि बनेको होइन ?”
सुनिता अगाडि लेख्छिन्, “अ’न्याय र अ’त्याचार बि’रुद्ध बोल्ने पाउने अधिकार छ । साधारण आवेशमा भएको ग’ल्तिमा यो सम्मको निर्णय गर्नु आ’पत्तिजनक छ ।”